Uefa Oo Ku Ganaaxday Guardiola Garran Uu Soo Xidhay
HomeChampions LeagueUefa Oo Ku Ganaaxday Guardiola Garran Uu Soo Xidhay
Pep Guardiola ayaa ganaax kala kulmay xidhiidhka kubada cagta Yurub kadib markii uu soo xidhay funaanad ama garran uu ku taageerayo uguna mudahraadayo cadaalad in la mariyo dilkii Weriyaha Reer Argentina ee dhintay intii ay socdeen ciyaaraha koobka aduunka ee sanadkii hore.
Jorge ‘Topo’ Lopez ayaa ku dhintay magaalada Sao Paulo bishii July kadib markii baabuur Taxi ah oo uu magaalada ku dhex marayay lagu dhuftay baabuur la soo xadday. Wuxuu magaalada u joogey si uu u soo tebiyo ciyaartii semi finalka Koobka aduunka ee Argentina kula ciyaaraysay Netherland garoonka Arena Corinthians.
Geerida weriyahan caanka ahaa ayaa sababtay in badi ciyaarihii koobka aduunka ay hadhayso tacsida loo dirayo, taas oo ay dirayeen qaar kamid ah tababarayaasha ugu caansan dunida kubada cagtu.
Laakiin iyadoo diyaar garowga olole cadaalad lagu dalbanayo dad badani u diyaar garoobayaan, dunidana taageerayaal badan uu codkaasi ka hellay, waxay UEFA go’aan satay inay ka jawaabto bandhigii qoraalka funaanada ku qoran ahaa ee uu soo xidhay Guardiola, ka hor ciyaartii Bayern ee Champions League ay kaga adkaatay Porto.
Tababaraha Bayern ayaa ka soo xaadiray shirkiisii jaraa’id isagoo ku lebisan garan ay wajahada kaga xardhan tahay weedhaha #JusticiaParaTopo (cadaalad ayaan rabnaa kiiska Topo).
Qoraalkan ayaa ka horyimid shuruucda iyo qawaaniinta xeerka UEFA oo aan ogolayn in garoomada lala yimaado qoraalo xayaysiis aan ahayn kuwa garoomada ku dhex qoran, waxaanay xidhiidhka Yurub xaqiijiyeen Arbacadii inay Guardiola ku ganaaxeen “muuqaal aan ahayn kuwa ciyaaraha markuu soo xidhay”.
PSG vs Lille 3-1 – All Goals & Extended Highlights – Ligue 1
Tababare Klopp Oo Faahfaahin Ka Bixiyey Sababta Ay Coutinho U Iibiyeen
Klose Oo Jabiyey Rikoodhkii Ronaldo